Frank Lampard oo sheegay in Morata uu noqon doono halyey hadii uu sidan sameeyo - Jazeera FM
Frank Lampard oo sheegay in Morata uu noqon doono halyey hadii uu sidan sameeyo
March 13, 2018 admin featured
Halyeyga kooxda Bules ee Frank Lampard ayaa aaminsan in xidga xulka qaranka spain ee Morata uu micno badab uyeeli doona kulanka habeen dambee oo arbaca ah ay qaadan doonaan kooxaha Barcelona iyo chelsea .
Garoonka kooxda Barcelona ee Nou Camp ayaa habeen dambe lagu ciyaari doonaa lugta labaad ee wareega 16-ka tartanka champions league xili kulankii ka dhacay garoonka Stamford Bridge lugtii hore uu ku soo gaba gaboobay barbaro 1-1.
Morata’s malamid noqon doonaa Fernando Torres waa su aasha taagan hada waxaana la xasuustqa in laacibkii hore ee kooxda Liverpool oo baska ka tuuray Barcelona sanadkii 2012.
Lampard oo uwaramayey majalada la yiraahdo the Evening Standard ayaa sheegay : “Alvaro Morata waxa uu heystaa fursad ween kulanka habeen dambe oo arbaca ah hadii uu go’aamiyo ciyaarto marna taageerayaasha ma hilmaami doonaan .
“Morata waxa uu ku socdaa xaalad xun balse wa in uu fiiriya Fernando Torres wax qabadkiisii garoonka Camp Nou.
“lix sano ka hor Torres ayaa lugtiiisa ki reebay Barcelona daqiiqadihii ugu dambeyey ee ciyaarta markaas oo ay chelsea isaga xaadirisay finalka tartanka champions league ugu dambeena ay hanteen .
The post Frank Lampard oo sheegay in Morata uu noqon doono halyey hadii uu sidan sameeyo appeared first on Wararka Ciyaaraha.
← Manchester United Oo Heshay Badalka Paul Pogba, Tallow Waa Kuma?…
RASMI: Joshua Kimmich oo qalinka ku duugay hishiis ilaa iyo sanada →